Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ilizwe | Ummandla » iunited Kingdom » Uvavanyo: Ngoobani abantu 'abathandwa kancinane' e-UK?
AmaGypsies kunye nabahambi base-Ireland baye babizwa ngokuba "ngabantu abancinci abathandwayo" e-UK, kunye noluntu lwamaSilamsi lubambe indawo yesibini kuluhlu loluntu oluninzi olungathandwayo.
Abaphandi beYunivesithi yaseBirmingham babambisene noYouGov ukwenza uvoto ukuze babone "ukuba abantu baseBhritane bacinga ntoni ngamaSilamsi, amaSilamsi kunye nolunye uhlanga kunye neenkolo ezincinci."
Injongo yokuqala yolu phando yayikukunceda ekukhanyiseleni ubungakanani kunye nobume be-Islamophobia e-UK.
Ngokweziphumo zokugqibela zovavanyo, iiGypsies kunye nabahambi baseIreland babizwe ngokuba "ngabona bantu bathandwa kakhulu" UK, kunye noluntu lwamaSilamsi olubambe indawo yesibini kuluhlu lwezona ndawo zingathandwayo.
Uvoto luveze ukuba i-25.9% yabaphenduli be-1,667 "baziva bengamkelekanga" kumaSilamsi, kunye ne-9.9% baziva "bebi kakhulu."
Kuphela iiGypsies kunye nabahambi baseIreland bajongwa kakubi ngakumbi luluntu lwaseBritane, kunye ne-44.6% yabantu abajonga ngendlela embi, ingxelo ithi.
Ngeli xesha, i-8.5% yabajonga kakubi abantu bamaJuda, ngelixa i-6.4% ithetha okufanayo ngabantu abamnyama - kwaye i-8.4% yathi ibajonga kakubi abantu abamhlophe.
Abaphandi bagqiba kwelokuba isimo sengqondo esibi esinjalo soluntu lwaseBritani ngakuGypsies kunye nabahambi baseIreland sinokuchazwa kungekuphela nje ngocalucalulo, kodwa nangenxa yokuba kukho “isohlwayo esincinane esidlangalaleni esinxamnye nokuvuma ekuhleni ukuba ubani akathandi.”
I-Islamophobia yafunyaniswa iza "kwiintlobo ezimbini ezahlukeneyo, ubuhlanga kunye nenkolo."
"Nangona sivumelana neenkcazo zamva nje zegama elithi i-Islamophobia luhlobo lobuhlanga olujolise kumaSilamsi, sikwabonisa ukuba lubonakalisa ucalucalulo olwahlukileyo lwenkolo," yatsho ingxelo.
Ngokutsho kombhali wengxelo, uGqr Stephen Jones, i-social taboos inokuchaphazela kakhulu iimpendulo.
"Into enika umdla uyabona ukuba kukho, umzekelo, ukucalulwa kwabantu abamnyama baseCaribbean kwiCaribbean UK, kodwa kuphando abantu abayibonakalisi loo ntiyo ngendlela abenza ngayo kumaSilamsi, ngendlela abenza ngayo kumaGypsies kunye nabahambi baseIreland,” utshilo.
UGqr Jones uthe kukho ingqiqo yokuba iintlobo ezithile zobutshaba "zamkelekile esidlangalaleni," evuma ukuba izizathu zoku zinzima: "Kuxhomekeke kumelo lwethu lwemithombo yeendaba, kubunkokeli bethu bezopolitiko, kwizinto ezahlukeneyo zembali nenkcubeko."
Oku ngakumbi: AmaSulumane | Caribbean | Birmingham
Abantu baseCaribbean bazibandakanya nephulo likaAirbnb Live and Work Anywhere Caribbean|
Umbutho woKhenketho weCaribbean ubiza uMcebisi omtsha kwezoNxibelelwano Caribbean|
Birmingham Caribbean AmaSulumane
U-Israel uceba ukuhamba ngenqwelomoya okukhulu kwamaYuda ukusuka eUkraine ukuba iRussia iyahlasela
Imakethi yokuhamba kwi-Intanethi isetelwe ukufikelela kwiibhiliyoni zeedola ezingama-765.3 nge...
Ukukhangela usana olutsha lweGerber
Iqela leWestJet libhengeza ukuqeshwa okutsha kwiBhodi yalo...
I-St. Thomas Carnival ibuyile buqu kwimbali...
IMarike yeSondlo seZilwanyana iProtease- uPhuhliso oluQongayo...
NgoFebruwari 5, 2022 kwi-21: 47